धनी हुने सबैभन्दा सजिलो तरिकाः यौनसम्बन्धलाई उत्कृष्ट बनाउनुहोस्। - Malayakhabar
होम पेज फिचर धनी हुने सबैभन्दा सजिलो तरिकाः यौनसम्बन्धलाई उत्कृष्ट बनाउनुहोस्।
एजेन्सी := मानिसको जीवन विभिन्न भागमा बाँडिएको हुन्छ । आवश्यकता र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन बनाउनका लागि आफूलाई बलियो र परिपक्व बनाउनुपर्छ । हालै गरिएका केही अनुसन्धानले पैसासम्बन्धि मामलाले मानिसहरुको यौन जीवनलाई प्रभावित पारिरहेको हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यस्तो दबाबबाट कसरी बच्ने, यसबारे जानकारी लिऔं।
तपाईंको जीवनमा पैसा महत्वपूर्ण छ कि प्रेम ? यदि यस्तो प्रश्न सोधिए सायद जवाफ दिन सक्नुहुन्नँ होला । जीवनमा दुबैको आ–आफ्नै महत्व छ । यी दुबै जीवनमा अत्यावश्यक छन् । पैसा बिनाको प्रेम समयअगावै चाउरिन सक्छ र धेरै पैसा कमाउने लोभमा कसैलाई सम्बन्धबाट टाढा लैजान सक्छ।
अमेरिकामा हालै भएको नर्थवेस्टर्न म्युचुअलले आफ्नो एक अध्ययनमा वयस्कमा तनाव र दबाबको मुख्य कारण पैसा नै भएको बताएको छ । यसको सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव उनीहरुको सम्बन्धमा परिरहेको छ । यो अनुसन्धानमा संलग्न १० दम्पत्तीमध्ये चारले पैसाका कारण सम्बन्धमा खटपट भइरहेको स्विकारेका छन्।
अघिल्लो लेख ओली सरकार ढाल्ने देउवाको प्रस्तावमा महन्थ असहमत!
पछिल्लो लेख भारतमा एकैदिन १ लाख ४५ हजार कोरोना संक्रमित थपिए।